Campo Santo, anovandudza Firewatch ajoina Valve | Linux Vakapindwa muropa
vharafu Izvo hazvina kuregeredza nyika yemitambo yemavhidhiyo uye mukana wekuenderera mberi kuburitsa mazita, uye netariro zvakare yeLinux. Ivo vatotaura kare kuti vari kuda kubheja zvakanyanya pasirese yemitambo yemavhidhiyo muGNU / Linux uye kuti kukundikana kweSteam Machine hazvireve kuti varega kugadzira iyo SteamOS distro, ndoda, uye vacharamba vachitipa mufaro . Zvakare, ikozvino iye anovandudza Campo Santo akabatana navo, imwe chete iyo yakagadzira Firewatch.
Campo Santo akasimbisa zviri pamutemo kuti nhau idzi ndedzechokwadi, achiti vanhu vemuValve vanogovana zvimiro zvakafanana nezvavo uye kuti pairing iyi ichavasimbisa vese. Mushure mekukurukurirana kwenguva refu pakati pemapato maviri, vanozoshanda pamwechete vachibatanidza matarenda ku vanoita zvinhu zvavaisambofunga kuti zvinogona kuitika zvakasiyana. Izvi hazviite sekukanganisa mapurojekiti aripo ezvidzidzo zvese pamberi pemubatanidzwa.
Muchokwadi, zita rekupedzisira Campo Santo rakashanda parinodaidzwa Mumupata weVamwari, zita rinovimbisa uye risina kubviswa kana chero chakadaro. Basa rese rakaitwa neanogadzira richaramba richiitwa, chete ikozvino chichava zita rinogoverwa pasi pekuraira kweValve. Naizvozvo, tichava nenhau nezvazvo munguva pfupi, uye ndinovimba kuti tinogona kuzvinakidzwa paGNU / Linux semamwe akawanda mazita.
Mune mawonero angu, iyi mhando ye kubatanidzwa kunobatsira. Kumwe kubatanidzwa kwatakaona munguva yakapfuura kunogona kuisa mamwe masevhisi panjodzi kana kusagadzikana, asi neiyi ivo vari kungotora tarenda kuValve kuti varambe vachigadzira mazita nekambani ine zviwanikwa nemari yakawanda kupfuura Campo Santo. Zvakare, Valve inogara ichipa kupa yakanaka Linux rutsigiro. Izvo zvinongosara kuti uone kana Mukati meMupata weVamwari, uri ikozvino kubva kuValve, yakavhurwa zvakare paGOG kana chete paStam ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Campo Santo, Firewatch mugadziri ajoina Valve